सिटिजन्स बैंकमा सेयर छ ? विहीबारदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन हुँदै छ « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
सिटिजन्स बैंकमा सेयर छ ? विहीबारदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन हुँदै छ
२३ चैत्र २०७३, बुधबार ०९:४०
काठमाडौ २३ चैत । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको हकप्रद सेयर निष्काशन भोलि ९विहीबार०देखि खुला हुने भएको छ । बैंकले २५ प्रतिशत अर्थात १० बराबर २।५को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकले जारी गर्न लागेको हकप्रदमा गत फागुन २५ गतेसम्म कायम झन्डै ८० हजार सेयरधनीले आवेदन दिन पाउनेछन् । हकप्रद निष्काशन बैशाख २७ गतेसम्म खुला रहनेछ ।
प्रकाशित : २३ चैत्र २०७३, बुधबार ०९:४०